Wararka - Maamulka Baker-Polito waxay ku dhawaaqeen maalgalinta Teknolojiyada Casriga ah ee dhirta Daaweynta Qashinka
Maamulka Baker-Polito wuxuu ku dhawaaqay Maalgalinta Teknolojiyada Casriga ah ee dhirta Daaweynta Qashinka
Maamulka Baker-Polito ayaa maanta abaalmarin ahaan $ 759,556 ugu deeqay si ay u taageeraan lix horumar farsamo oo casri ah oo loogu talagalay xarumaha daaweynta biyaha wasakhda ah ee Plymouth, Hull, Haverhill, Amherst, iyo Palmer. Maalgelinta, oo lagu abaalmariyey barnaamijka Pilot ee Daaweynta Biyaha Wasakhda ah ee Massachusetts (MassCEC), waxay taageertaa degmooyinka lagu daweeyo biyaha wasakhda ah iyo maamulka Massachusetts oo muujiya tikniyoolajiyad casri ah oo lagu daaweynayo biyaha tusaya suurtagalnimada in la yareeyo baahida tamarta, soo kabashada ilaha sida kuleylka, biomass, tamar ama biyo, iyo / ama nafaqooyinka degdega ah sida nitrogen ama fosfooraska.
"Daaweynta biyaha wasakhdu waa geedi socod tamar badan leh, waxaana naga go'an inaan si dhow ula shaqeyno dawladaha hoose ee guud ahaan barwaaqa sooranka si aan u taageerno teknoolojiyad casri ah oo horseed u noqda tas-hiilaad nadiif ah oo wax ku ool ah," ayuu yiri Guddoomiye Charlie Baker. "Massachusetts waa hogaamiye qaran oo hal abuurnimo waxaana rajeyneynaa inaan maalgalino mashruucyadan biyaha si bulshada looga caawiyo yareynta isticmaalka tamarta iyo yareynta qarashaadka."
"Taageerida mashaariicdan waxay gacan ka geysan doontaa hormarinta tikniyoolajiyadaha hal abuurka ah oo si weyn u wanaajin doona habka daaweynta biyaha wasakhda ah, oo ah mid ka mid ah macaamiisha ugu badan ee isticmaala korantada bulshadayada," ayuu yiri gaashaanle dhexe Karyn Polito. "Maamulkayagu wuxuu ku faraxsan yahay inuu taageero istiraatiijiyad ah siiyo dawladaha hoose si looga caawiyo inay la kulmaan caqabadaha ay kula dhaqmaan biyaha wasakhda ah ugana caawiyaan sidii loo ilaalin lahaa tamarta barwaaqosooranka."
Maalgelinta barnaamijyadan waxay ka timid MassCEC's Cusboonaysiinta Tamarta Cusboonaysiinta ee ay abuureen Sharci dejinta Massachusetts 1997 markay ahayd qayb ka mid ah xakamaynta suuqa korontada. Aaminaadda waxaa lagu maalgeliyaa lacag-faaiido nidaamyo ay bixiyaan macaamiisha korontada ee Massachusetts ee korontada, iyo sidoo kale waaxyaha korantada ee degmada ee doortay inay ka qaybgalaan barnaamijka.
"Massachusetts waxaa ka go'an inay la kulanto himilooyinkeenna yareynta gaaska lagu koriyo, iyo la shaqaynta magaalooyinka iyo magaalooyinka gobolka oo dhan si loo hagaajiyo waxtarka hannaanka daaweynta biyaha wasakhda ah ayaa naga caawin doonta inaan gaarno yoolalkaas," ayuu yiri xoghayaha arrimaha tamarta iyo deegaanka Matthew Beaton. "Mashaariicda uu taageeray barnaamijkan waxay gacan ka geysan doonaan hannaanka daaweynta biyaha wasaqeysan yareynta isticmaalka tamarta iyo gaarsiinta faa'iidooyinka deegaanka ee bulshadayada."
"Waxaan ku faraxsanahay inaan siino bulshooyinkan ilo ay ku sahamiyaan tikniyoolajiyad casri ah oo labadaba hoos u dhigaya qiimaha macaamiisha iyo hagaajinta waxtarka tamarta, Ayuu yiri madaxa shirkadda MassCEC, Stephen Pike. "Daaweynta biyaha wasakhda ah waxay u taagan tahay caqabad joogto ah oo ka jirta degmooyinka mashaariicdani waxay bixiyaan xalal suurtagal ah iyagoo gacan ka geysanaya in Barwaaqo Sooranka ay dhisaan booskooda hoggaamiye qaran ee waxtarka tamarta iyo tikniyoolajiyadda biyaha."
Khubarada waaxda ee Waaxda Badbaadinta Deegaanka ee Massachusetts ayaa kaqeyb qaatay qiimeynta soojeedimaha waxayna soo bandhigeen talo bixin ku saabsan heerka hal-abuurnimo ee la soo jeedinayo iyo waxtarka tamarta ee suurtogalka ah ee la xaqiijin karo.
Mashruuc kasta oo la bixinayo waa iskaashi u dhexeeya degmo iyo shirkad tiknoolajiyad bixisa. Barnaamijku wuxuu ka helay $ 575,406 dheeraad ah maalgelin lixda mashruuc ee tijaabada ah.
Degmooyinka soosocda iyo kuwa bixiya tikniyoolajiyadda ayaa la siiyay maalgelin:
Gagada Diyaaradaha ee Dowlada Hoose ee Plymouth iyo Ilaalinta Deegaanka ee JDL ($ 150,000) - Maalgelinta ayaa loo isticmaali doonaa in lagu rakibo, lagula socdo, laguna qiimeeyo xuub tamarta tamartiisu hooseyso ah oo lagu daaweeyo biyaha wasakhda ah xarunta yar ee madaarka lagu daweeyo biyaha wasakhda ah.
Magaalada Hull, AQUASIGHT, iyo Woodard & Curran ($ 140,627) - Maalgelinta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu hirgeliyo laguna ilaaliyo barmaamij sirdoon macmal ah, oo loo yaqaan APOLLO, kaas oo ku wargeliya shaqaalaha biyaha wasakhda ah arrimo kasta oo hawlgal ah iyo tallaabooyin kordhin doona waxtarka hawlgalka.
Magaalada Haverhill iyo AQUASIGHT ($ 150,000) - Maalgelinta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu hirgaliyo laguna dayactiro barnaamijka sirdoonka macmalka ah ee APOLLO ee xarunta daaweynta biyaha wasakhda ah ee Haverhill.
Magaalada Plymouth, Kleinfelder iyo Xylem ($ 135,750) - Maalgelinta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu iibsado laguna rakibo dareemayaasha nafaqada optic ee ay soo saartay Xylem, taas oo u adeegi doonta habka ugu muhiimsan ee habka loo xakameeyo geeddi-socodka ka-saarista nafaqada.
Magaalada Amherst iyo Shirkadda kululaynta buluugga ($ 103,179) - Maalgelinta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu rakibo, lagu kormeero, laguna amro bamka kuleylka ee biyaha wasakhda, kaas oo ku siin doona cusbooneysiin iyo isdaba-joogsi joogto ah, qaboojin, iyo biyo kulul Xarunta Wax-ka-qabashada Qashinka ee Amherst oo laga helo ilo la cusbooneysiin karo.
Magaalada Palmer iyo Shirkadda Biyaha ($ 80,000) - Maalgelinta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu rakibo nidaamka xakamaynta hawo-ku-saleysan nitrogen oo ay weheliso qalab sambal ah.
“Webiga Merrimack waa mid ka mid ah waxyaabaha dabiiciga ah ee ugu weyn ee aan wadaagno, gobolkeenuna waa inuu sameeyaa wax walba oo karaankiisa ah si loo xaqiijiyo ilaalinta Merrimack sannadaha soo socda,” ayuu yiri Senator-ka Gobolka Diana DiZoglio (D-Methuen). “Deeqdani waxay si weyn uga caawin doontaa Magaalada Haverhill qaadashada teknolojiyadda si loo kordhiyo waxtarka iyo waxtarka nidaamka daaweynta biyaha wasakhda ah. Casriyeynta dhirta lagu daaweynayo biyaha wasakhaysan waa tallaabo muhiim ah oo lagu hubinayo caafimaadka iyo badbaadada maahan oo kaliya dadka deegaanka ee u isticmaala wabiga madadaalada iyo isboortiga, laakiin xayawaanka duurjoogta ah ee ugu yeera Merrimack iyo nidaamkiisa deegaanka. ”
"Maalgalintan ka socota MassCEC waxay u oggolaan doontaa Hull inay hubiso in xaruntooda daweynta biyaha wasakhda ah ay socoto iyada oo aan wax arrimo hawleed ah ka jirin," ayuu yiri Senator-ka Gobolka Patrick O'Connor (R-Weymouth). Maaddaama aan nahay bulsho xeebeed, waxaa muhiim u ah nidaamyadeenna inay si hufan oo ammaan ah u shaqeeyaan. ”
"Waan ku faraxsanahay in MassCEC ay u dooratay Haverhill deeqdan," ayuu yiri Wakiilka Gobolka Andy X. Vargas (D-Haverhill).“Nasiib ayaan ku leenahay inaan koox weyn ku leenahay xarunta biyaha wasakhda ah ee Haverhill oo si xikmad leh u isticmaashay hal-abuurnimo si loo sii wanaajiyo adeegga dadweynaha. Waxaan u mahadcelinayaa MassCEC waxaanan rajaynayaa inaan sii wado taageeridda dadaallada gobolka ee hal-abuurka iyo hagaajinta tayada nolosha ee deggenayaashayada. ”
"Dawlada Dhexe ee Massachusetts waxay sii wadaa inay mudnaanta siiso maalgalinta iyo teknoolojiyada si loo wanaajiyo tayada biyaha dhamaan wabiyaasheena iyo ilaha biyaha laga cabo," ayay tiri Linda Dean Campbell (D-Methuen). "Waxaan ugu hambalyeynayaa Magaalada Haverhill hirgalinta tignoolajiyadan ugu dambeysay uguna qiimo jaban ee lagu horumarinayo daaweynta biyaha wasakhda ah iyo inay hadafkan mudnaanta siiso."
"Waxaan ka mahadcelineynaa maalgalinta Barwaaqo Sooranka ee bulshadeena si loo balaariyo isticmaalka Magaalada ee tikniyoolajiyadda wax ku oolnimada howlaha, iyo ugu dambeyn ilaalinta iyo caafimaadka deegaanka," ayuu yiri Wakiilka Gobolka Joan Meschino (D-Hingham).
"Sirdoonka Artifishalku waa tiknoolajiyad aad u rajo leh oo si weyn u wanaajin karta waxtarka iyo howlaha," ayuu yiri Wakiilka Gobolka Lenny Mirra (R-West Newbury). "Wax kasta oo aan sameyn karno si aan u yareyno baahida tamarta, iyo sidoo kale soosaarida nitrogen iyo fosfooraska, waxay noqon laheyd horumar muhiim u ah deegaankeena."